China Hot Sale 100% Pure Watermelon Juice Processing Line စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |ခုန်ပါ။
ဟင်းချက် အခြောက်ခံခြင်း နှင့် ကြော်ခြင်း
Hot Sale 100% ဖရဲသီးစစ်စစ် ဖျော်ရည် လိုင်း
1 နှစ်အာမခံ၊ တစ်သက်တာရောင်းချမှုဝန်ဆောင်မှု
စက်ယန္တရားများကို နိုင်ငံခြားတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော အင်ဂျင်နီယာများ
turnkey ဖြေရှင်းချက်၊ A မှ Z ဝန်ဆောင်မှု
ဖောက်သည်အတွက် သင့်လျော်သော ဒီဇိုင်း၊ 100kg/H မှ 100T/H
တစ်လလျှင် 20 Set/Sets
တည်ငြိမ်သော သစ်သားအထုပ်သည် စက်ကို ရိုက်ချိုးခြင်းနှင့် ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။အနာပလပ်စတစ်ဖလင်သည် စက်ကို စိုစွတ်ပြီး ချေးမတက်အောင် ထိန်းပေးသည်။ အငွေ့ကင်းသော အထုပ်သည် ချောမွေ့သော အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးကို ကူညီပေးသည်။ အရွယ်အစားကြီးမားသောစက်ကို အထုပ်မပါဘဲ ကွန်တိန်နာတွင် ပြုပြင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
ရေလှောင်ကန် → ရေစိုပန့် → ကလင်းကျောက်စစ်ထုတ်ခြင်း → အသက်သွင်းပြီး ကာဗွန်စစ်ထုတ်ခြင်း → PH ချိန်ညှိကိရိယာ → တိကျသောစစ်ထုတ်ခြင်း → RO ကိရိယာ → ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သုံးပိုးသတ်ဆေး → ရေသန့်ကန် → သန့်စင်သောရေစုပ်စက်
သန့်ရှင်းရေး → ရိုက်နှက်ခြင်း → အင်ဇိုင်းမိုလေစစ် → စစ်ထုတ်ခြင်း → သကြားဗူးများ → အဖျော်ယမကာ ပန့် → ဆေးရည် စစ်ထုတ်ခြင်း → ဖျော်စပ်သည့် တိုင်ကီ → အဖျော်ယမကာ ပန့် → နှစ်ထပ် စစ်ထုတ်ခြင်း → အလွန်မြင့်မားသော အပူချိန် ပိုးသတ်ဆေး → မြင့်မားသော ပိုးမွှား insulation tank → CIP သန့်ရှင်းရေး ကိရိယာ → CIP ပြန်ပန့်
ဆေးဗူးများ → ဖြည့်သွင်းခြင်းနှင့် တံဆိပ်ခတ်ခြင်း2ယူနစ်တွင် 1 ယူနစ် → ဘူးများကို လှန်ခြင်း → ပို့ဆောင်ခြင်းစနစ် → ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းပိုးသတ်ခြင်း → ပြင်းထန်သော အခြောက်ခံခြင်း → Inkjet ပရင်တာ → ဗူးများကို လှည့်ခြင်း → လက်ဖြင့် ထုပ်ပိုးခြင်း
ပိုးသတ်ဆေးကန်၊ ရောစပ်ကန်၊ တိုက်ရိုက်အအေးခံကန်၊ ပူအအေးကန်၊ သကြားအိုး၊ တုံ့ပြန်မှုပန်းကန် အပူဖလှယ်ကိရိယာ၊ စစ်ထုတ်ကိရိယာ၊ အလျားလိုက် ပိုးသတ်အိုး၊ အလွန်မြင့်မားသော အပူချိန်ချက်ချင်း ပိုးသတ်စက်၊ ကြွယ်ဝသောပစ္စည်းများ၊ CIP သန့်ရှင်းရေးကိရိယာ၊ အဖျော်ယမကာပန့်၊ ဇကာ စက်ပစ္စည်းများ၊ ရေပျော့ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းကိရိယာ၊ ဘီတာ၊ ကော်လွိုက်ကြိတ်စက်၊ ဖျော်ရည်စက်၊ အမျိုးအစားတူ၊ လေဟာနယ်၊ ဖုန်စုပ်စက်၊ ဘက်စုံသုံး ထုတ်ယူသည့် တိုင်ကီ၊ ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများ၊ သန့်ရှင်းရေး valves စသည်တို့
1. လွတ်လပ်စွာ ထားရှိပါ။
ဒီဇိုင်းလုပ်ရန်ဖရဲသီးဖျော်ရည်/ပျော့ဖတ်/သန့်စင်သော စီမံဆောင်ရွက်မှုလိုင်းသည် စွမ်းအင်နှင့် အရင်းအနှီးကို အလေးထားပါသည်။အခမဲ့ အခမဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။008613681836263
JUMP သည် ခရမ်းချဉ်သီးငါးပိနှင့် စုစည်းထားသော ပန်းသီးဖျော်ရည်လုပ်ငန်းလိုင်းတွင် ခေါင်းဆောင်မှုရာထူးကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသော သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် အဖျော်ယမကာ ကိရိယာများတွင် ထက်မြက်သော အောင်မြင်မှုများကိုလည်း ပြုလုပ်ထားပါသည်၊
1. လိမ္မော်ဖျော်ရည်၊ စပျစ်သီးဖျော်ရည်၊ ဂျူဘီဖျော်ရည်၊ အုန်းရည်/အုန်းနို့၊ သလဲသီးဖျော်ရည်၊ ဖရဲသီးဖျော်ရည်၊ cranberry ဖျော်ရည်၊ မက်မွန်သီးဖျော်ရည်၊ သခွားမွှေးသီးဖျော်ရည်၊ သင်္ဘောသီးဖျော်ရည်၊ ပင်လယ် buckthorn ဖျော်ရည်၊ လိမ္မော်ရည်၊ စတော်ဘယ်ရီဖျော်ရည်၊ ပိုးစာ၊ ဖျော်ရည်၊ နာနတ်သီးဖျော်ရည်၊ ကီဝီသီးဖျော်ရည်၊ wolfberry ဖျော်ရည်၊ သရက်သီးဖျော်ရည်၊ ပင်လယ် buckthorn ဖျော်ရည်၊ ထူးခြားဆန်းပြားသောအသီးဖျော်ရည်၊ မုန်လာဥနီဖျော်ရည်၊ ပြောင်းဖူးဖျော်ရည်၊ မာလကာသီးဖျော်ရည်၊ cranberry ဖျော်ရည်၊ ဘလူးဘယ်ရီဖျော်ရည်၊ RRTJ၊ loquat ဖျော်ရည်နှင့် အခြားဖျော်ရည်ဖျော်ရည်ဖျော်ရည်များ ဖျော်ရည်ဖြည့်ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်း
2. Peach စည်သွတ်ဗူး၊ မှိုစည်သွပ်ဗူး၊ ငရုတ်သီးအချဉ်ရည်၊ ငါးပိ၊ စည်သွတ် arbutus၊ လိမ္မော်သီးစည်သွတ်၊ ပန်းသီး၊ သစ်တော်သီးစည်သွတ်၊ နာနတ်သီးစည်သွတ်ဘူး၊ ပဲတီစိမ်းစည်သွပ်ဗူး၊ မျှစ်စည်သွပ်ဘူး၊ သခွားသီးစည်သွပ်ဘူး၊ မုန်လာဥနီစည်သွပ်ဘူး၊ စည်သွတ်ချယ်ရီသီး၊ စည်သွတ်ချယ်ရီ
3. သရက်သီးဆော့စ်၊ စတော်ဘယ်ရီဆော့စ်၊ cranberry ဆော့စ်၊ စည်သွတ်ဘူး hawthorn ဆော့စ် စသည်တို့အတွက် ဆော့စ်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွမ်းကျင်သောနည်းပညာနှင့် အဆင့်မြင့် ဇီဝအင်ဇိုင်းနည်းပညာကို ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပ ယိုနှင့်ဖျော်ရည်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းပေါင်း 120 ကျော်တွင် အောင်မြင်စွာ အသုံးချကာ သုံးစွဲသူအား ကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်များနှင့် စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်များရရှိစေရန် ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။
သင့်နိုင်ငံတွင် စက်ရုံကို မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို သင်အနည်းငယ်သိပါက စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ သင့်အတွက် စက်ပစ္စည်းများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးရုံသာမက သင့်ဂိုဒေါင်ဒီဇိုင်း (ရေ၊ လျှပ်စစ်၊ ရေနွေးငွေ့)၊ လုပ်သားသင်တန်း၊ စက်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် အမှားရှာပြင်ခြင်း၊ တစ်သက်တာရောင်းချပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှု စသည်တို့။
အတိုင်ပင်ခံ + သန္ဓေတည်ခြင်း။
ပရောဂျက် အကောင်အထည်မဖော်မီ ပထမအဆင့်အနေနှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား လေးနက်စွာ အတွေ့အကြုံရှိပြီး အရည်အချင်းပြည့်မီသော အတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ပါမည်။သင်၏ ပကတိအခြေအနေနှင့် လိုအပ်ချက်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စေ့စေ့စပ်စပ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းချက်(များ)ကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးပါမည်။ကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုတွင်၊ ဖောက်သည်အား အာရုံစိုက်သော တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းဆိုသည်မှာ - ကနဦးသန္ဓေတည်သည့်အဆင့်မှ စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၏နောက်ဆုံးအဆင့်အထိ စီစဉ်ထားသည့်အဆင့်အားလုံးကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာနှင့် နားလည်သဘောပေါက်သည့်ပုံစံဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပရောဂျက်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းချဉ်းကပ်မှုဆိုသည်မှာ ရှုပ်ထွေးသော အလိုအလျောက်စနစ်ဆိုင်ရာ ပရောဂျက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် ကြိုတင်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။တာဝန်တစ်ခုစီ၏ အခြေခံအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အချိန်ဘောင်များနှင့် အရင်းအမြစ်များကို တွက်ချက်ကာ မှတ်တိုင်များနှင့် ရည်မှန်းချက်များကို သတ်မှတ်ပါသည်။သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးသောအဆက်အသွယ်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်၊ ပရောဂျက်အဆင့်များအားလုံးတွင်၊ ဤပန်းတိုင်ကိုဦးတည်သည့်အစီအစဥ်သည် သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပရောဂျက်ကိုအောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်ရန်သေချာစေသည်။
ဒီဇိုင်း + အင်ဂျင်နီယာ
မက်ချာထရိုနစ် နယ်ပယ်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အထူးကျွမ်းကျင်သူများ၊ အင်ဂျင်နီယာချုပ်များ၊ ပရိုဂရမ်းမင်းနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အဆင့်တွင် အနီးကပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကိရိယာများ၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ဤပူးတွဲတီထွင်ထားသော အယူအဆများကို ဒီဇိုင်းနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအဖြစ် ဘာသာပြန်ဆိုပါမည်။.
ထုတ်လုပ်မှု + စည်းဝေးပွဲ
ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေ့အကြုံရှိသော အင်ဂျင်နီယာများသည် အလှည့်ကျသော့စက်ရုံများတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆန်းသစ်တီထွင်သော အကြံဉာဏ်များကို အကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ပရောဂျက်မန်နေဂျာများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းဝေးပွဲအဖွဲ့များကြား အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် ထိရောက်ပြီး အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်လုပ်မှုရလဒ်များကို သေချာစေသည်။စမ်းသပ်မှုအဆင့်အောင်မြင်ပြီးနောက်၊ စက်ရုံကို သင့်ထံ လွှဲပြောင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။
ပေါင်းစည်းခြင်း + ကော်မရှင်ပေးခြင်း
ဆက်စပ်ထုတ်လုပ်မှုဧရိယာများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမှန်သမျှကို အနည်းဆုံးလျှော့ချရန်နှင့် ချောမွေ့စွာတပ်ဆင်ခြင်းကို အာမခံရန်အတွက်၊ တပ်ဆင်ခြင်းအား ပရောဂျက်တစ်ခုချင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသော အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပညာရှင်များမှ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ နှင့်ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်များ။ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေ့အကြုံရှိ ဝန်ထမ်းများသည် လိုအပ်သော အင်တာဖေ့စ်များ အားလုံး အလုပ်လုပ်ကြောင်း သေချာစေပြီး သင့်စက်ရုံကို အောင်မြင်စွာ လည်ပတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
1. ခရမ်းချဉ်သီး၊ စတော်ဘယ်ရီ၊ ပန်းသီး၊ သစ်တော်သီး၊ apricot စသည်တို့အတွက် သင့်လျော်သော အသီးများကို ညှပ်ထားသောပုံးများကို ချောမွေ့သောပုံးတည်ဆောက်ပုံ။
2. ဆူညံသံနည်းပါးသော၊ transducer ဖြင့် ချိန်ညှိနိုင်သော အမြန်နှုန်းဖြင့် တည်ငြိမ်စွာလည်ပတ်ခြင်း။
3. anticorrosive ဝက်ဝံ, နှစ်ဆနှစ်ဖက်တံဆိပ်။
1 လတ်ဆတ်သောခရမ်းချဉ်သီး၊ စတော်ဘယ်ရီ၊ သရက်သီးစသည်တို့ကိုဆေးကြောရန်အသုံးပြုသည်။
2 အသီးကို သန့်ရှင်းစေပြီး ပျက်စီးမှု လျော့နည်းစေကြောင်း သေချာစေရန် လှိုင်းစီးခြင်းနှင့် ပွက်ပွက်ဆူခြင်း၏ အထူးဒီဇိုင်း။
3 ခရမ်းချဉ်သီး၊ စတော်ဘယ်ရီ၊ ပန်းသီး၊ သရက်သီး အစရှိသည့် အသီးအနှံ သို့မဟုတ် ဟင်းသီးဟင်းရွက် အမျိုးအစားများစွာအတွက် သင့်လျော်သည်။
အခွံခွာခြင်း၊ ပျော့ဖတ်ခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်း Monobloc (Pulper)
1. ယူနစ်သည် အခွံခွာ၊ ပျော့ဖတ်နှင့် အသီးအနှံများကို အတူတကွ သန့်စင်နိုင်သည်။
2. ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံ၍ strainer မျက်နှာပြင်၏အလင်းဝင်ပေါက်ကိုချိန်ညှိနိုင်သည် (အပြောင်းအလဲ) လုပ်နိုင်သည်
3. ပေါင်းစပ်ထားသော အီတလီနည်းပညာ၊ အရည်အသွေးမြင့် သံမဏိပစ္စည်းများသည် သစ်သီးပစ္စည်းများနှင့် ထိတွေ့မှု။
1. acinus၊ pip သစ်သီးများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် အမျိုးအစားများစွာကို ထုတ်ယူ၍ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်းတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုသည်။
2. ယူနစ်သည်အဆင့်မြင့်နည်းပညာ၊ ကြီးမားသောစာနယ်ဇင်းနှင့်ထိရောက်မှုမြင့်မားသည်၊ အလိုအလျောက်ဒီဂရီမြင့်မားသည်၊ လည်ပတ်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်။
3. ထုတ်ယူမှုနှုန်းသည် 75-85% (ကုန်ကြမ်းပေါ်မူတည်၍) ရနိုင်သည်။
4. ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနည်းပါးပြီး မြင့်မားသည်။လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ဇ
2. အလိုအလျောက် အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အထွက်အပူချိန်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။
3. အဆုံးအဖုံးပါရှိသော Multi-tubular ဖွဲ့စည်းပုံ
4. ကြိုတင်အပူပေးပြီး ငြှိမ်းသတ်ပေးသည့် အင်ဇိုင်း၏ အာနိသင် မအောင်မြင်ပါက သို့မဟုတ် မလုံလောက်ပါက၊ ထုတ်ကုန်သည် ပိုက်ထဲသို့ အလိုအလျောက် ပြန်သွားပါသည်။
1. ချိန်ညှိနိုင်သော နှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နိုင်သော အပူကုသမှုယူနစ်များ။
2. နေထိုင်ချိန် အတိုဆုံး၊ ပြွန်၏ အရှည်တစ်လျှောက်တွင် ပါးလွှာသော ဖလင်တစ်ခု ရှိနေခြင်းသည် တင်းတိမ်မှုနှင့် နေထိုင်ချိန်ကို လျော့နည်းစေသည်။
3. မှန်ကန်သောပြွန်လွှမ်းခြုံမှုသေချာစေရန် အရည်ဖြန့်ဖြူးမှုစနစ်များ၏ အထူးဒီဇိုင်း။ဖြန့်ဖြူးသူသည် ပြွန်တစ်ခုစီ၏ အတွင်းမျက်နှာပြင်တွင် ဖလင်ဖွဲ့စည်းမှုကို သေချာစေသည့်နေရာတွင် ဖိဒ်သည် ကာလန်ဒီးယား၏ထိပ်တွင် ဝင်ရောက်သည်။
4. အခိုးအငွေ့ စီးဆင်းမှုသည် အရည်သို့ တွဲလျက် ရှိနေပြီး အခိုးအငွေ့ ဆွဲယူခြင်းသည် အပူလွှဲပြောင်းမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။အခိုးအငွေ့နှင့် ကျန်အရည်များကို ဆိုင်ကလုန်းခွဲထုတ်စက်တွင် ပိုင်းခြားထားသည်။
5. ခွဲထုတ်ခြင်းများ၏ ထိရောက်သော ဒီဇိုင်း။
ယခင်- ကြံဖျော်ရည်စက် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
နောက်တစ်ခု: အလိုအလျောက် အုန်းနို့ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကို အပြီးသတ်ပါ။
အလိုအလျောက်လိမ္မော်သီးနှင့် Apple ဖျော်ရည်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
K တိုင်းအတွက် သစ်သီးဝလံ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ပြုပြင်ရေးစက်များ၊
သစ်သီးဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖျော်ရည် Jam ထုတ်ယူခြင်းစက် Wi...
Turnkey Project Fresh စပျစ်သီး လိမ္မော် အုန်းရည်...
သလဲသီးဖျော်ရည် အာရုံစူးစိုက်မှု ထုတ်လုပ်မှုစက်
မာလကာရည် / ယို / သန့်စင်သော စီမံဆောင်ရွက်ပေးသော စက်ရုံ